Kiiska Apple Watch Epik wuxuu horeyba uga jiraa Kickstarter | Wararka IPhone
Cristina Torres sawir-haye | | Apple Watch
ka qaybta saddexaad ee ganacsi ahaan loo heli karo Apple Watch waxay bilaabaan inay noqdaan xaqiiqo. Inkasta oo Cupertino uu ogaaday in saacadihiisu ay kufiican yihiin inaan loo baahnayn iyaga, adeegsadayaashu islama fikiraan. Xiisaha ay u leedahay dhammaan noocyada kala duwan ee badeecadaha ayaa muujinaya tan, sidii horeyba ugu dhacday baahida ka timid adeegsadayaasha doonaya soo iibso aaladda xaqiijisay madax-bannaanida weyn ee Apple Watch. Xaaladdan oo kale, tan kale ee dhowaan run noqon karta waa mashruuca Epik.
Si waligaa ma maqal epik waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah inaadan aad uga war qabin dhammaan qalabyadaas oo run noqda iyada oo ay ugu wacan tahay tabarucaadda lacagta ee ka timaadda kuwa isticmaala ee iyaga xiiseynaya sidii inay yihiin maalgashadeyaal dhab ah. Waxaan si gaar ah uga hadlaynaa barnaamijka 'Kickstarter platform' ee ay Epik hadda ku degtay iyo in kaliya 24 saacadood ay durba ku guuleysatay hadafkii aruurinta ee ahaa $ 100.000.
La Guryaha Epik waxay siisaa ilaalin ballaaran Apple Watch-kaaga iyo qeybaheeda iyadoon saameyn ku yeelanaynin shaqadooda iyo kobcinta qaar ka mid ah. Naqshad ku habboon dalabaadka adeegsadayaasha Apple iyo qiime macquul ah oo la awoodi karo wareeggan daah-furka oo kaliya $ 25 ballanqaad ah in Epik laga dhigo qalab qiimo leh oo dalabkiisu sii kordhayo.
Dabcan, guryaha shirkaddan lama heli doono-ugu yaraan xilligan aysan jirin macluumaad noocaas ah- nooca 38mm ee Apple Watch ah. Tan macnaheedu waa in dhammaan adeegsadayaasha soo iibsaday Apple Watch aasaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba, ma awoodi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​faa'iidooyinka difaacooda. Iyo sida ugu badan ee ay Apple leedahay, waxaan horey u ogaanay in aaladaha, ay kuxirantahay sida aan u isticmaalno, inay jabi karaan. Iyo qiimaha saacadda, uma maleynayo inaan aad u qosol badan nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Kiiska Apple Watch Epik wuxuu hadda ku jiraa Kickstarter
Iyo sida ugu badan ee ay Apple leedahay, waxaan horey u ogaanay in aaladaha, ay kuxirantahay sida aan u isticmaalno, inay jabi karaan. Iyo qiimaha saacadda, uma maleynayo inaan aad u qosol badan nahay.
Waad la yaabtay maxaa yeelay waxaad ilaawday inaad eegto cidda daabacday maqaalka 😉
Jawaab Mig självwtf